भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यमा २५ सिट माथिका सार्वजनिक बस मात्र चल्न पाउने , के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ? यस्ता छन अबको नियमहरु – Kavrepati
Home / समाचार / भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यमा २५ सिट माथिका सार्वजनिक बस मात्र चल्न पाउने , के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ? यस्ता छन अबको नियमहरु
admin June 28, 2021	समाचार Leaveacomment 307 Views
त्यस्तै सहचालकले पञ्जा लगाउनुपर्ने र अनिवार्य रुपमा सवारीसाधन निसङ्क्रमित गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन बिहान ६ः०० देखि साँझ ७ः०० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । निजी सवारीसाधन (कार जीप, भ्यान) मा बढीमा चार र ट्याक्सीको हकमा बढीमा तीनजना मात्रै सवार गर्न पाउने नियम छ । मोटरसाइकल स्कुटरसमेत जोर बिजोर प्रणाली लागू चलाउन पाइने छ । स्वास्थ्यकर्मी, पशुस्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स, खानेपानी, विद्युत् मर्मतसम्भारका सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउने बताइएको छ ।
Previous लकडाउनमा भोकालाई निशुल्क खाना खुवाइरहेकाहरु पक्राउ, उनीहरुले प्रयोग गरेको जमिन पनि प्रहरीले खाली गरायो
Next बडी सेमिङको प्रतिशोधमा STAR बनेकी सम्झना बुढाथोकी शरीरकै कारण हराइन